Ngo inqubo yokwelapha yesimanje, amatshe atholakala enyongweni, izimpawu lokuhamba nabo, abizwa ngokuthi ngisho cholelithiasis noma amatshe atholakala enyongweni. Lesi sifo libhekene ukuhlukumeza ka bilirubin cholesterol umzimba kanye kumiswa amatshe zasezindaweni ezihlukahlukene esikhathini gallbladder.
Uma sikhuluma isithombe emtholampilo yalesi sifo, ngaleso sikhathi okokuqala udinga ukucacisa lokho gallbladder iseduze isibindi futhi isitsha nge Bile. Bile ngokuqhubekayo akhiqizwa isibindi futhi eqoqwe esinyeni nenyongo, okuyinto yena, ezingenalutho, sihamba endaweni duodenum ngesikhathi isidlo esilandelayo. Kubalulekile ukuqonda ukuthi kuyasiza ekugayeni ukudla, ngakho gallbladder uba "Isitoreji" okwesikhashana Bile futhi uyazifeza "supply" walo ku yembathani isicelo.
I zokugula kwenzeka kuphela esimweni lapho eside yokujama tsi of Bile cholesterol iqala kuxazululwe on odongeni isinye, futhi sebethule yayo eside kuphakamisa kumiswa amatshe amancane, okuyinto kancane kancane ngosayizi, bese zakha amatshe atholakala enyongweni emikhulu. Le nqubo normal lide kakhulu, evame kakhulu eziphilayo amadala, ukubuqeda ngokuphelele izilaleli iziguli yezingane ethize.
Uma sikhuluma izimbangela pathogenic, le amatshe atholakala enyongweni cholesterol ezibhekwa phetho iziyaluyalu umzimba, okuyinto akhiwa Bile, kanye ukungondleki, okuyinto ubuswa ukudla okunamafutha. Iqhaza evelele udlalwa yi-cholesterol ngokweqile kule Bile.
Isenzakalo kuyingozi kakhulu - amatshe e esinyeni inyongo izimpawu zazo imininingwane yabo. Isiguli iqala ukuwohloka ngezikhathi colic biliary, ezisabalele ngokuzumayo njengoZamcolo kuphakama. Kubalulekile wazi ukuthi colic hepatic kuhambisana ubuhlungu eqinile, okuyinto itholakala ilungelo isiphanga, loin kanye ehlombe. Iphinde zingase zibe zimbi ukuhlanza, ukugaya kahle futhi kakhulu ukwandisa izinga lokushisa, kodwa lezi zimpawu ukudlula, okuyinto lihlotshaniswa ukunyakaza kwamatshe uvule imbobo Bile. Uma itshe likhulu futhi awukwazi ukuhambisa, kubalulekile ukuba Ukungenela ngesikhathi esifanele esisodwa operable. Uma ubhajwe ku ezivamile Bile imbobo, kungase ukuthuthukisa i-jaundice kanye ukulimala kwesibindi. Uma amatshe atholakala enyongweni wathola, akukho izimpawu ke leli fomu zokugula Kungahlonzwa ngomshini kuphela ultrasound.
Ukwelashwa nokuvikelwa lalesi sifo ezimbili okufanele akhethe kuzo: kuhlinzwa, olandelanayo. Ngo indlela olandelanayo kusekelwe ukudla okuqinile, kanye nokuqapha njalo isimo sabo. Control ultrasound uqaphe ngokunembile ngentuthuko amatshe, kanye nokuziphatha kwabo kule gallbladder. Kwezinye izimo kuhle ukusebenzisa imithi ochwepheshe onolwazi kuphela abanomthelela le cleavage zemvelo amatshe elimazayo. Noma kunjalo, ukwamukela lezi imithi lide kakhulu, ngoba amatshe ngendlela enzima ukuncibilikisa. Ngaphezu kwalokho, kukhona imithi, ogama isinyathelo yakhelwe ukuvimbela ukwakheka yabo.
Ngezinye izikhathi isithombe emtholampilo idinga i operation ngokuthi cholecystectomy, okubandakanya ekususweni gallbladder nazo zonke amatshe pathogenic. Small cholesterol amatshe angahlakaza ursodioksiholovoy futhi henodioksiholovoy acid. Ukwelapha kufanele liphindwe njalo njengoba amatshe ngisho nangemva zingase zimiswe ukususwa kwabo futhi.
Ungasusa amatshe atholakala enyongweni, izimpawu kungabuye uvinjelwe ngokusebenzisa nezindlela zokugwema. Ukuze wenze lokhu, ukunciphisa isisindo emzimbeni Imininingwane ngokudla okunama-kilojoule amancane Ukudla ne encishisiwe lokucuketfwe fat. Kuyinto uyelulekwa ukunciphisa edonsa cholesterol emzimbeni. Nge umsoco ofanele kungaba isikhathi eside ukuba bakhathazeke ukuqhubeka kwesifo.
Syndrome Hyperthermic ezinganeni. Siza nge hyperthermal syndrome
Ukuvuvukala kwesibindi - isifo esiyingozi. Izimpawu, izinhlobo, zokuvimbela
Isehlukaniso ebukhoneni ingane. Isehlukaniso emndenini eyingane.